I-LXQt 0.16 isivele ikhishiwe futhi lezi yizinguquko zayo ezibaluleke kakhulu | Kusuka kuLinux
I-LXQt 0.16 isivele ikhishiwe futhi lezi yizinguquko zayo ezibaluleke kakhulu
Abathuthukisi be-LXQt Desktop Environment (ithuthukiswe yithimba lokuthuthukisa le-LXDE namaphrojekthi weRazor-Qt) umemezele ukukhishwa kwenguqulo entsha ye-LXQt 0.16, lapho kwenziwe khona ukuthuthuka ekusetshenzisweni kwemvelo, kanye nokwengezwa kwezindikimba ezintsha ezi-3.
Kulabo abangazi nge-LXQt, kufanele wazi ukuthi this yindawo yamahhala nevulekile yedeskithophu yeLinux, umphumela wokuhlangana phakathi kwamaphrojekthi we-LXDE neRazor-qt futhi obekwe njenge inketho enhle kakhulu yamaqembu ezinsizakusebenza eziphansi noma lawo akhetha ukonga izinsizas, njengokuthuthuka okukhulu kwe-LXQt kunikeza ideskithophu engasindi nokulawula okuningi kune-LXDE.
Yini okusha ku-LXQt 0.16
Ku-LXQt 0.16 wenze ukuthuthuka okuthile kumphathi wefayela I-PCManFM-Qt kanye nomtapo wezincwadi weLibFM-Qt, kusukela izinketho zengeziwe ukushintshela kuthebhu entsha nokuvula amathebhu kusuka ewindini lokugcina. Ukuhlukaniswa kwefayela kwenziwe kwemvelo ngokwengeziwe ngokuphatha ichashazi njenge-delimiter, ehambelana nokuziphatha kwe-GTK.
Kungeziwe izinketho ezintsha zokuvula ingxoxo evulekile nezinguquko zokumiswa ziyagcinwa. Kungezwe inketho yokuvula izinkomba ezitholakala kudeskithophu kwimenenja yefayela ezenzakalelayo, hhayi kuphela ku-PCManFM-Qt naku kungezwe ibhokisi le- "Default Applications" kumhleli we-lxqt-config-file-association, okuvumela ukuthi ukhethe isiphequluli sewebhu esizenzakalelayo, umphathi wefayela, neklayenti leposi (ngenxa yalokho, ukumiswa kwenhlangano yefayela kuyasuswa esimisweni se-LXQt).
Futhi, kule nguqulo entsha ye-LXQt 0.16 manje Iphaneli le-LXQt linamandla okulungisa ukufihla okuzenzakalelayo kwenkomba yesimo (Isazisi sesimo). Kungezwe inketho yezinkinobho zomsebenzi ukuhambisa amawindi kusikrini esilandelayo.
Imenyu enkulu ine-amingqikithi yezimo iboniswa lapho uchofoza kwesokudla. Imodi yokubeka izinkinobho ezingahlanganisiwe isetshenzisiwe wohlelo lokusebenza eceleni.
Kungezwe isigaba ku-LXQt Power Management ukumisa izenzo ezizothathwa lapho izinkinobho zokuvala, zokulala nezokulinda zicindezelwe.
I-emulator yokugcina I-QTerminal isebenzisa izinketho zokuvula ithebhu entsha kwesokudla kwale yamanje bese ukhubaza ukuvala ithebhu lapho inkinobho yegundane ephakathi icindezelwe.
Isibukeli sesithombe I-LXImage-Qt ikhulise inani lezinhlobo zezithombe iyahambisana. Kungezwe ikhono lokukhulisa usayizi wezithombe. Inkinobho eyengeziwe yokukopisha indlela yefayela eya esithombeni.
Of ezinye izinguquko ezigqamile kusuka ku-LXQt 0.16:
Kungezwe amandla wokukhetha nokwenza ngezifiso ama-palettes wombala kusihleli se-lxqt-config.
Isibonisi esithuthukisiwe sokulawula ukukhanya.
Imenenja yefayela ye-LXQt ilungiselelwe ukuvula okuqukethwe kwamaphakeji we-RPM.
Umtapo wezincwadi we-libQtXdg ungeza izingcingo ukumisa nokuchaza isiphequluli sewebhu esizenzakalelayo, imenenja yefayela neklayenti leposi.
Kusistimu yokubonisa izaziso, inketho ingeziwe ukukhombisa izaziso esikrinini esiseduze kwesikhombisi segundane.
Iwijethi yePulseAudio Volume Control ixazulula izinkinga lapho ixhuma amadivayisi womsindo nge-interface ye-Bluetooth.
Izikhumba ezintathu ezintsha zengeziwe: i-Clearlooks, Leech, ne-Kvantum.
Ngokufananayo, umsebenzi uyaqhubeka ekukhishweni kwe-LXQt 1.0.0, ezohlinzeka ngokusekelwa okugcwele kokusebenza eWayland.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-LXQt 0.16 isivele ikhishiwe futhi lezi yizinguquko zayo ezibaluleke kakhulu
I-Dmenu neRofi: Iziqalisi ezi-2 ezihle kakhulu zohlelo lokusebenza zama-WM
IGoogle iveza iphutha ku-GitHub